Global Voices teny Malagasy » Vetaveta, Fivarotan-tena, Na Fahafatesana: Ny Maha-Sarindahy Na Sarimbavy Ao Khyber Pakhtunkhwa Any Pakistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Vetaveta, Fivarotan-tena, Na Fahafatesana: Ny Maha-Sarindahy Na Sarimbavy Ao Khyber Pakhtunkhwa Any Pakistana
Voadika ny 31 Aogositra 2016 7:59 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Pakistana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Ireo sarimbavy mankalaza Eid ao Pakistana. Sary nomen'ny Trans Action Pakistan
Ny volana Jona lasa teo, lehilahy telo no niditra an-kery tao amin'ny trano iray tao Mansehra ary nikasa ny hanolana ilay olona nonina irery tao, niafara tamin'ny fitifiran'izy ireo imbetsaka azy izany. Sarimbavy iray antsoina hoe Kashi io vehivavy io, izay vehivavy iray monja tamin'ireo sarimbavy ao Pakistana voatafika tato anatin'ny volana maromaro. Tamin'ny volana May, Alehsa, sarimbavy sy mahery fo tao amin'ny vondrona “Trans Action”, no maty teny amin'ny hopitaly taorian'ny tifitra enina nataon'ireo mpanafika azy. Talohan'ny nahafatesany, mbola naharay tolotra hanao lahatsary vetaveta i Alesha, izay nolàviny ny hanaovana azy.
“Inona No Hadisoanay? “
Nanao ezaka ny fiarahamonina misy ireo sarindahy tato anatin'ny taona maromaro. Ny taona 2012, nomen'ny Fitsarana Avo Pakistane alàlana  ny hampidirana ny sokajy “karazana fahatelo” ho ao anatin'ny karapanondro, izay nampitombo be ny sata manoloana ny lalàna ho an'ny vondrom-piarahamonin'ireo nanova fananahana sy nahafahany nanan-jo hifidy. Fara-fahakeliny sarimbavy dimy no nihazakazaka nilatsaka ho fidiana. Kanefa mbola miely patrana ireo fanafihana manjo ilay vondrom-piarahamonina, ary mitombo hatrany ireo herisetra tato anatin'ny taona maromaro lasa. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2016, manakaiky ny 45 ireo sarimbavy voatafika tao amin'ny faritanin'i Khyber Pakhtunkhwa monja.
Ampiasain'ny vondrom-piarahamonina misy ireo sarimbavy ao Azia Atsimo mba hamaritany fotsiny ny tenany ny hoe khwaaja sira, ary ahitàna ny nanova fananahana, ny khusra (olona nanda ny maha-lahy na vavy azy), ireo sarimbavy ‘zenanans‘ ary ireo lehilahy vositra ‘nambans‘
Monina ao anatin'ny vondrom-piarahamoniny izay tarihin'ny Guru (mpampianatra) iray ireo Siras Khwaja, amin'ny fananganana ireo tovolahy narian'ny fianakaviany na nandositra. Amin'ny ankapobeny, mamelon-tena ilay vondrom-piarahamonina, na dia maro amin'ireo mpikambana aza no miasa ho toy ny mpandihy matianina na mpivaro-tena. Noho ny maha-voafetra ny fahafahany mahazo asa, tena tandindonin-doza be izy ireo fa lasibatry ny herisetra rehefa manao fampisehoana aminà fampakarambady na fety isankarazany. Matetika lasibatra ihany koa izy ireo rehefa manao firaisana ara-nofo.
Mizara amin'ny fomba mahazatra ireo antsipirihany mikasika ireo fanafihana manjo nvondrom-piarahamonin'ny nanova fananahana ny Fikambanana Trans Action Khyber Pakhthunkhwa
Tsy ara-dalàna ny fivarotantena ao Pakistana ary matetika ireo mpikambana amin'ny vondo-mpiarahamonin'ny sarindahy sy sarimbavy no tandindonin-doza be. Na dia ireo sarindahy/sarimbavy tsy mpivarotena aza, anefa, dia voalaza fa iharan'ny sotasota sy filam-baniny tonga hatramin'ny fanaovana firaisana. Efa nanomboka nandefa tatitra tamin'ny Facebook ireo sarimbavy, mikasika ny fomba miaro herisetra ataon'ireo mpitandro filaminana amin'ny vondrom-piarahamonin'ny sarindahy/sarimbavy.
Eo anatin'ny lahatsary eo ambony, sarimbavy iray manazava ny fomba nisamboran'ny mpitandro filaminana ny mpanjakan'izy ireo ‘guru’ tao anatin'ny fety iray:
Nanatrika fety iray izahay raha iny tonga avy any ny polisy naka ny Guru-nay, narahanay ry zareo avy eo. Matin'ny fihomehezan'ny olona izahay, nanesoeso sy nanenjika anay ny olona, noho izany mazava ho azy fa tsy namela anay hiditra ao anatin'ny paositry ny polisy ny mpitandro filaminana ka nanapa-kevitra ny hanohitra sy hihiakiaka izahay “avelao izahay hiditra, avelao izahay hiditra”, nitoraka vato ny varavarana ireo zazalahy sasantsasany nijoro teo akaiky teo, vokatr'izay, tonga avy tao aorianay ny polisy (…) nisambotra sady nidarika mafy anay. Jereo anie toejavatra manjo azy ireo e, norovitin-dry zareo ny fitafiany (…) norovitin-dry zareo tsara koa ny fitafiako ary nodarohany aho. Polisy enina no indray nitontona teo amiko sady nidaroka ahy, torana aho nony avy teo. Na dia efa torana aza aho dia mbola nodakany ihany sady noteneniny hoe “mitsangana, mitsangana, tsy ilaina manohitra intsony” (…). Nisambotra indray izy sady nisintona tamin'ny volo, nidaroka ny hafa tamin'ireo hazo be. Fa inona ny hadisoanay e? Nanaraka ny Guru-nay fotsiny anie izahay e? Inona no mety ho nataonay tamin'ny polisy? Naka vola taminay mihitsy aza (maka an-tsokosoko) ry zareo, ary hatramin'ny volan'ny Guru-nay koa, ka inona ny hadisoanay?
Ao anaty lahatsary  iray hafa, nitatitra ireo sarimbavy avy ao an-tanànan'i Nowshera fa efa notazonin'ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny ora folo :
Sarindahy/sarimbavy fito omaly no notazonina tsy ara-dalàna nandritra ny ora folo tao amin'ny Paositry ny polisy Nowshera Cantt. Nalàna ny ambonin'ankanjony ary nanaovana sotasota ara-nofo izy ireo. Nokasihan'ny polisy anterisetra avokoa ny faritra isankarazany tamin'ny vatan'izy ireo.
Tsy ao Khyber Pakhtunkhwa ihany
Nitarika fanentanana ireo sarimbavy avy ao an-tanànan'i Faislabad, Punjab, taorian'ny fanolanana faobe nataon'ireo roalahy tamina sarimbavy telo, tamin'ny herinandro lasa teo. Tao anaty andiana  lahatsary mahaontsa iray, namaritra ny herisetra sy ireo fikasana hanomezana henatra sy hampanginana azy sy ireo niharam-boina hafa, miaraka amin'ireo karazana fandrahonana herisetra bebe kokoa, ny sarimbavy antsoina hoe Julie.
Ao anaty tontolo iray izay nahatsapàn'ny sarindahy/sarimbavy fa, na na ny polisy aza tsy mandray ny andrikitra araka ny tokon yho izy manoloana ireo meloka, dia nanjohy ny media sosialy izy ireo mba hisarika ny saina mikasika ny fitomboan'ny fanavakavahana sy ireo herisetra manjo ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Mampiseho an'i Julie sy ireo mpanohana azy ireo lahatsary zaraina ao amin'ny Facebook, manao hetsi-panoherana ao amin'ny hopitaly iray ao an-toerana, taorian'ny nilazàn'ny dokotera mpiandry raharaha iray izay heverina fa tokony ho nitsabo ireo ratrany, taminy fotsiny hoe “avelao amin'izao io”.
Na teo aza ireo fihetsiketsehana maro, ny tatitry ny polisy, ary ireo fihaonana an-gazety marobe, maro amin'ireo ao anatin'ny vondrom-piarahamonina sarindahy/sarimbavy no nahatsapa fa voaesoeso sy tampenam-bava izy ireo, nefa mbola mitohy hatrany miaraka amin'ny tsimatimanota ny herisetra atao amin'izy ireo.
‘Tsy Ho Leo Izahay’
Manambatra ny heriny ireo sarindahy/sarimbavy manerana ny firenena mba hampibaribary ny herisetra ara-drafitra sy ny fanilikilihana. Na eo aza ireo fandrahonana, tohizan-dry zareo ireo ezaka hanetsehana, amin'ny alalan'ny fitakiana amin'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana mba hiaro azy ireo. Tao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny Facebook , nampahatsiahy ireo mpanaraka azy ny Trans Action Khyber Pakhthunkhwa fa hanohy hiady ho an'ny zon'ireo sarindahy/sarimbavy:
Fantatray ny zonay ary hijoro izahay hitaky izany. Vao fanombohana fotsiny ireo. Hetsika iray izahay, mpiady ‘mavokely’. Tsy misy mihemotra. Olom-pirenena miralenta isika eto Pakistana. Lavinay ny hipetra-potsiny. Na eo aza ireo fanamby sy ireo sakana rehetra, vitanay ny nikarakara hetsi-panoherana iray teo ivelan'ny Bolton Block izay nahafatesan'i Alisha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/31/87135/
 lahatsoratra iray ao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/TransActionKP/posts/1274268165918130